January 8, 2021 - Babal Khabar
Jan82021 by बबाल खबरNo Comments
भारतको बिहार राज्यको पटनामा एक बैंकमा एउटा ला’श आफ्नो पैसा लिन पुग्यो । बैंकमा उसलाई देखेर कर्म चारीको सा’तो गयो । पटना छेउको शा’ह जहाँ पुर था’ना क्षेत्रको सि’ गरिया वांमा केनरा बैंकको शाखामा ला’श पैसा लिन पुगेको हो । यहाँका महेश यादवको मंगलबार बिहान मृ’त्यु भएको थियो । मृ’त्युपछि गाउँले हरुले अ’न्तिम संस्कारको लागि बैंकमा गएर उनको खातामा भएको पैसा बैंकका कर्मचारी सँग मा’गे तर बैंक म्यानेजरले पैसा दिन मानेनन् । यो कुराले रिसाएका गाउँलेले यादवको ला’श लिएर बैंकमा पुगे र ला’शलाई बैंकभित्र राखिदिए । लगभग ३ घण्टा सम्म बैंकमा महेशको ला’श त्यत्तिकै रह्यो ।गाउँलेहरु पैसा नलिइ मान्न तयार थिएनन् । अन्ततः म्यानेजरले आफ्नै १० हजार रुपैयाँ गाउँ लेलाई दिएर वि’वाद सुल्झाए । पैसा पाए पछि गाउँ लेहरुले महेशको ला’श लिएर अ’न्तिम सं’स्कारको लागि गए ।खासमा महेशको बिहे भएको थिएन र उनको परि वारमा पनि कोही थ
अ’चानक मो’डल अ’ञ्जली अधिकारीलाई य’स्तो के भयो ? (भिडियो सहित)
सामाना म्युजिक क्रियशन युटुब च्यानल मार्फत ‘पानी पाए पछि’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सामाना शाहको शब्द सङ्कलन र केशव श्रेष्टको अभिनय रहेको लोकदोहोरी गीत ‘पानी पाए पछि’को भिडियो सार्व जनिक भएको हो । गायिका बिष्णु माझी र भगीरथ चलाउनेको स्वरमा रहेको गीत ‘पानी पाए पछि’मा भगी रथ चलाउ नेको सङ्गीत रहेको छ । बिनोद पराजुलीको एरेञ्ज रहेको गीतको रेकर्डि ङ राजेन्द्र बाजुरालीले गरेका छन् । अञ्जली अधिकारी र केशव श्रेष्टको अभिनय रहेको गीतको भिडियोलाई सिर्जन बरालको निर्देशन छ । राजेश घिमिरेको छायाँकन रहेको भिडियोमा अमृत चापागाईंको सम्पादन छ । निरज श्रेष्टको सह निर्देशन रहेको भिडियोको फोटो ग्राफर आयुष सापकोटा रहेका छन् । प्रेम कहानीमा आधारित कारुणीक भिडियोको दृष्य निर्माण जनता डिजिटल फिल्मस् नेपालले गरेको हो । यो पनि: ट्रम्पको फेसबुक अकाउन्ट २४ घण्टालाई ब'न्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोना
कस्तो दुखद खबरः छोरीकै आँखा अगाडी आमाको ‘हृ’दयविदारक’ मृ’त्यु
। को भिड–१९ का कारण अ स्पता ल भर्ना भएका आमा छोरीमध्ये आमाले आँखा अगाडि प्रा ण त्या’ गेपछि छोरीले सा’वधानी अपनाउन अ’पिल गरेकी छन्। लेस्टशरकी ७६ वर्षीया मारिया रिकोले आफ्ना दुईजना छोरीसँग अन्तिम पटक बोल्नका लागि आफ्नो अक्सि जन मास्क ह’टाएकी थिइन्। उनलाई त्यसो गर्दा आफ्नो प्रा’ण चाँडै जाँदै छ भन्ने थाहा थियो । ए’नाबेल शर्माले उक्त क्षणलाई हृ’द यवि दारक भनेकी छन्। तर उनी आफ्नी आमाले एक्लै मृ’त्युव रण गर्नु परेन भनेर प्रसन्नता व्यक्त गरिन् । उनले भा इर सबारे जनचेतनाका लागि आमासँगको अ’न्तिम क्षणको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन्। विटेककी शर्माले अक्सि जन मास्क ह’टाएको आधा घण्टा पछि आफ्नी आ माको नि’धन भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘मेरी आमाले उनीह रूलाई मास्क ह’टाउन भ न्नुभयो। उनीहरूले एक पटक मास्क ह’टाएपछि तपाईँ लामो समयका लागि रहनुहुन्न भनेका थिए। अनि उहाँले मलाई त्यो थाहा छ मलाइ अब पुगिसक्यो
काठ्माण्डौमा एउटा यस्तो मन्दिर छ, जहाँ मनले चाहेको हरेक कुरा पूरा हुने गर्छ ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस्, तपाइले चाहेको कुरा पुरा हुनेछ ॐ
काठ्माण्डौको डिल्लीबजार र ज्ञानेश्वरका बीचमा अवस्थित मैतीदेवी मन्दिरमा नेवार समुदायका वज्राचार्यहरुले पुस्तौँदेखि पूजा गर्दै आएका छन् ।उनीहरु मन्दिरको रेखदेखकर्ता र संरक्षकका साथै पुजारीका रुपमा चिनिन्छन् ।मन्दिरको स्थापना विसं ६८५ वर्षमा अंशु वर्माको शासनकालमा भएको मानिन्छ स्थानीयवासी एवम् पुजारीले यहाँका पूजा तथा अन्य सांस्कृतिक कार्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका छन् । पुस्तौँ देखि पूजा गर्दै आएका मुख्य पुजारी तीर्थज्योति वज्राचार्य दैनिक सयौँ भक्तजन मन्दिरको दर्शन गर्न आउने भएकाले पूजाको व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने गरेको बताएका छन् । आफ्ना पुर्खाले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिने र जनताको सेवा गर्ने सुवसर पाएकामा आफू भाग्यमानी रहेको उनको भनाइ छ । उनका पाँच पुस्ताले एक सय २० वर्षदेखि पूजा चलाउँदै आएका छन् ।दैनिक पूजामा खटिने पुजारीले मासिक तलब रु पाँच सय र पूजा खर्च रु दुई
मिल्ने भए दुःख हटाइ खुशी किन्थेँ आमा भन्ने स्टाटस सेयर गर्दै पोर्चुगलमा २७ वर्षीय दिनेश यसरी सँधैका लागि विदा भए
काठमाडौ । बझाङका २७ वर्षीय दिनेश कुमार कुँवरले पोर्चु गलको राजधानी लिस्बनमा आफू बसेको होस्टे लबाट हा’म फालेर आ’त्म’ह’त्या गरेका छन् । पोर्चुगलाई कर्म थलो बनाउँदै आउनु भएका कँुवरको शुक्रबार नेपाल जाने तयारीमा रहेको अवस्थामा फेसबुकमा ‘मिल्ने भए दुःख हटाइ खुशी किन्थेँ आमा, आफ्नो को हुन् पराइ को हुन् सबै चिन्थेँ आमा’ स्टाटस सेयर गरेर आफू बस्दै आएको होस्टे'लको चार तलाबाट हा’म फाल्दा घट' नास्थ लमै मृ’त्यु भएको हो । एउटै होस्टेल को'ठामा बसेका साथी र परिवा रका सदस्यलाई आफ्नो आ’त्म’ह’त्या गर्ने आफ्नो बोली अन्तिम भनेर भनेपछि कुँवरले साथी भा'न्सा कोठामा गएको मौका छोपी हा'म फालेको कुरा पोर्चुगाली प्र'हरीले बताएको छ ।
कुनै पनि केटीले तपाईंलाई मन पराएको यसरी थाहा पाउनुस, पुरा पढनुस
कुनै राम्री केटी बाटोमा हिँडिरहँदा धेरै केटाहरुको नजर पर्छ । उनीहरु केटीलाई घु'रेर हेर्ने मात्र होइन, आँखा झिम्क्या'उन, जि'ब्रो प'ड्का'उन सम्म पछि पर्दैनन् । उस्तैले त ‘आई लभ यू’ नै भनिदिन्छन् । तर, केटीहरुको हकमा यो लागू हुँदैन । केटीहरु स्वभावैले लजालु हुने भएकाले केटाहरुलाई जि'स्क्याउने त आँ'टै गर्दैनन् । बाटो हिँडिरहेको कुनै पुरुष मन पर्‍यो भने उनीहरु खुलेर व्यक्त गर्न सक्दैनन् । चोरी(चोरी हेर्छन् । त्यसैले उक्त पुरुषले थाहै पाउँदैन कि कुन केटीले उसलाई मन पराइरहेकी छिन् ।तथापि, यस्ता केही संकेतहरु छन्, जसको मद्दतले सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ कि कुनै केटीले तपाईंलाई मन पराइरहेकी त छैन ? हाँस्नुरमुस्कुराउनु कुनै केटीले एउटा पुरुषलाई देखेर हाँस्ने वा मुस्कुराउने गर्छिन् भने त्यसलाई सामान्य मात्रै सोच्नु हुँदैन । ती यसले पुरुषप्रति युवती विशेष रुपमा आकषिर्त छिन् भन्ने स
स्कुलको ८ कक्षामा पढ्ने कि’शोरी ल’गातार दु’ब्लाउँदै गएकी थिइन् । छोरीको हा’लत देखेर आमाले उनलाई भारतको पञ्जाव स्थित एक अस्प ताल लिएर गइन् । अस्प ता लमा डाक्टरले उनको जाँच गरेपछि आमा लाई रिपोर्ट दिंदै छोरी ए’च आ’इ भी सं’क्र मित भएको बताए पछि आमा बे’होस भइन् । आमाले छोरी कसरी सं क्र मित भइन् भन्ने थाहा नभएको बताएकी छिन् । कि’शोरीका अनुसार उनको साथमा ११ र १२ कक्षा पढ्ने ३–४ जनाको समूह छ । केही समय अघि देखि उनीह रुको मित्रता थियो । एक दिन साथी हरुले उन लाई सेतो रंगको पा’उ डर ल्या’एर सुँ’घ्न भने । यो पनि सन्सार भर प्रसिद्ध हास्य कलाकार मिस्टर बिनले लिए बिदा, कारण यस्तो ३ महीनादेखी बे’पत्ता श्रीमतीलाई श्रीमानले लगे घर, खुसी हुदै श्रीमतिले य’स्तो भनिन् (हेर्नुस् भिडियो) साथी हरुको कुरा मानेर उनले पनि त्यो पाउ डर सुँ’घेर हेरिन् । त्यस पछि विस्तारै त्यसको बा’नी भयो । उनले विगत १ वर्षदेख